mars 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
RECOLLECTION 06 AVRIL 2014
Fotoana natokan’ny Paroasy Mb Anne eto Anjomakely hanaovana « récollection » ho an’ny rehetra ny alahady 06 aprily 2014, ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Paka. Toy izao ny fandaminana: ENY…
Continuer la lecture RECOLLECTION 06 AVRIL 2014
Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Toriteny
Ny rano : entina hilazàna an’Andriamanitra sy ny Fanahy Masina
Betsaka ny resaka momba ny rano henontsika ao amin’ny Soratra Masina, fa santionany ihany ireto.
Md Joany miresaka ny rano novàna ho divay nandritra ny mariazy tany Kanàna
Md Joany miresaka ny rano manasitrana ireo marary izay mitsoboka ao farihin’ny Betesda.
Jesoa niteny tamin’I Nikôdema indray andro: “Tsy maintsy hateraka amin’ny rano sy ny Fanahy indray ny olona”.
Md Joany mitantara ilay rano nivoaka tamin’ny lanivoan’I Jesoa tamin’izy niala aina teo ambony hazofijaliana ka notrobaran’ny miaramila lefona: rano sy rà nivoaka tao.
Tao amin’ny vakiteny voalohany no ahitantsika ny tantaran’ny zanak’Israely tany an’efitra (tany maina tsy misy rano). Nimenomenona tamin’I Moïzy izy ireo “Nahoana izahay no entinao aty amin’ny tany efitra mba ho faty? Mangetaheta izahay, na ny zanakay na ny bibinay!”
=> Nokapohin’I Moizy tamin’ny tehina ny vatolampy tao (Massà sy Meribà) mba hamoaka rano, ka niboiboika avy ao ny rano.
Ny Evanjely kosa dia mitantara an’ilay vehivavy Samaritanina miresaka amin’I Jesoa. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Toriteny
Vakiteny voalohany: Boky Eksaody (Eks 17, 3- 7)
» Omeo rano izahay hosotroinay «
Tamin’izany andro izany dia main’ny hetaheta ka nimonomonona tamin’i Môizy nanao hoe: « Ahoana no nampiakaranao anay hiala tany Ejipta, hahafatin’ny hetaheta anay sy ny zanakay mbamin’ny bibinay? » Dia nitaraina tamin’ny Tompo i Môizy nanao hoe: « Inona no hataoko ho an’ity vahoaka ity, fa kely foana sisa tsy hitorahany vato ahy? » Ary hoy ny Tompo tamin’i Môizy: « Mialohà ny vahoaka ka ento hiaraka aminao ny loholon’i Israely, ataovy an-tànanao koa ny tehinao nikapohanao ny ony, dia mandehana. Fa indro Aho hitsangana eo anoloanao ao amin’ilay vatolampy izay any Hôreba; hikapoka ny vatolampy ianao, dia hivoaka rano ary hisotro ny vahoaka ». Nataon’i Môizy teo anatrehan’ny loholon’i Israely izany, ary nomeny anarana hoe: Masah sy Meribah io fitoerana io, fa nila akisa ny zanak’i Israely, sy naka fanahy ny Tompo nanao hoe: « Eto afovoantsika ve ny Tompo sa tsia? »
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Rôma ( Rôm 5, 1-2. 5-8 )
» Efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny Fanahy Masina nomena antsika ny fitiavana «
Ry kristianina havana, efa nohamarinina noho ny finoana isika, ka mihavana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay ahazoantsika manatona amim-pinoana izao fahasoavana itoerantsika tsara izao, sy mifaly amim-panantenana ny voninahitr’Andriamanitra. Ary ny fanantenana tsy mba manodoka, satria efa voarotsaka ao am-pontsika tamin’ny Fanahy Masina nomena antsika ny fitiavan’Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty tamin’ny fotoana voatendry i Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy. Saika tsy misy manaiky ho faty hamonjy ny olo-marina; ary angamba hisy ihany sahy maty hamonjy ny manao soa. Fa izao kosa no nanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika: fony mbola mpanota isika no maty hamonjy antsika i Kristy.
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Joany (Jo 4, 5- 42)
» Ny rano izay omeko dia ho tonga loharano miboiboika hatrany amin’ny fiainana mandrakizay «
Tamin’izany andro izany, i Jesoa tonga tany amin’ny tanànan’i Samaria anankiray atao hoe Sikara, akaikin’ny saha nomen’i Jakôba an’i Jôsefa zanany; teo no nisy ny fantsakan’i Jakôba. Ary sasatry ny dia nalehany i Jesoa ka nipetraka tsotra izao teo amoron’ny fantsakana, tokony ho tamin’ny ora fahenina. (suite…)
Continuer la lecture Alahady fahatelo Karemy – 23/03/2014 – Tenin’Andriamanitra
Ny asa voalohany: natao tamin’izany dia nampiditra herinaratra na “Electricité” , ny orinasa SEM no nampiditra ny jiro. (suite…)
Continuer la lecture Ndao ho tantaraina, ny lasa tsy ho fanadino
Vavaka fangatahana fandriampahalemana
Ry Andriamanitra Rain'ny Famindram-po ô, Noharianao ho iray Fianakaviana Aminao izahay, ary tsimbininao hatrany, hiadana sy ho finaritra. Tsy nahay namaly fitia anefa izahay indrisy, fa nanalavitra anao, ka latsaka…
Continuer la lecture Vavaka fangatahana fandriampahalemana